Walllọ ọrụ na-arụ ọrụ na-agba agba dị warara | China Thin Wall High Speed ​​Speed ​​Manufacturers, Suppliers
Thin Wall High Speed ​​Ọgwụ GH-380
Ọgwụ na ịkpụzi igwe ule Anyị etinyewo ego karịa 10 ụdị dị iche iche nke ọgwụ ebu, nke na-na-na-anwale dị iche iche nke injection ịkpụzi igwe. Offọdụ n'ime ihe ndị a kwesịrị ekwesị maka ịkpụzi ọgwụ na-agba ọsọ ọsọ, ụfọdụ chọrọ nkwekọ nkenke dị elu, ụfọdụ na-arụkwa ebu ndị nwere mpempe akwụkwọ dị n'akụkụ ma ọ bụ ndị kwesịrị ekwesị maka ịkpụzi ọgwụ nke ihe pụrụ iche test Nnwale ahụ ga-agba ọsọ na igwe maka 24 awa. , gụnyere plastic ịkpụzi usoro te ...
Mkpa Wall High Speed ​​Ọgwụ GH-280
Thin Wall High Speed ​​Ọgwụ GH-250
Njikwa ogo nke akụkụ niile azụrụ na mpụga Anyị na-agbasi ike na nhọrọ nke ndị na-eweta ngwaahịa. 90% nke ị nweta mmanụ mmiri na akụrụngwa eletriki sitere na ụdị ndị a ma ama n'ụwa. N'otu oge, maka ihe ndị a, anyị nwere ike ikwe nkwa ma ọ dịkarịa ala otu afọ nke mmesi obi ike. A na-eme ule dịgasị iche iche nke anụ ahụ na kposara, gbọmgbọm, ogwe mgbidi na eriri eriri. Tupu ịrụ nkenke machining, anyị mkpa àgwà insp ...
Thin Wall High Speed ​​Ọgwụ GH-210
Nkenke Ọgwụ, Nkenke Plastic Ọgwụ na ịkpụzi, Nkedo nkenke, Nkenke Ọgwụ na ịkpụzi Inc., Nkenke Ọgwụ na ịkpụzi, Mkpa Wall Ọgwụ na ịkpụzi igwe,